Qwerty Elemental Boorsooyinka Gacanta - Joornaalka Naqshadeynta
Boorsooyinka Gacanta Sida la mid ah isbeddelka naqshadeeyayaasha qorayaasha ayaa muujinaya isbeddelka qaab muuqaal ahaan aad u murugsan una beddelaya qaab nadiif ah, qaab joomatari oo fudud, Qwerty-elemental waa qaab-dhismeedka xoogga, sumadda, iyo fududeynta. Qeybaha bir-dhiska ee ay farsameeyaan farsamoyaqaanno kaladuwan waa muuqaal muuqaal ah oo soosaara, oo bacda siiya muuqaal muuqaal ah. Awoodda daruuriga ah ee boorsadu waa laba fure furayaal oo kuwa iskood u sameysan oo ay isku soo dubariday naqshadeeyaha lafteeda.
Magaca mashruuca : Qwerty Elemental, Magaca naqshadeeyayaasha : Patrizia Donà, Magaca macmiilka : Donà.
Naqshadeynta moodada iyo dharka safarka
Boorsooyinka Gacanta Patrizia Donà Qwerty Elemental